Boosaaso:-Wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari ayaa sheegay in labo ka tirsan ciidanka canshuuraha Puntland lagu dilay Boosaaso xili ay ku guda jireen waajibkooda shaqo. Labada askari ayaa waxaa la dilay xil ay ku mashquulsanaaayeen aruurinta canshuurta waxaan dilkooda uu ka dhacay Bartamaha magaalada Boosaaso oo ah goob aad u mashquul badan waxaaan goobta dilka ka dhacay ku sugnaa dadweyne fara badan iyo gaadiid kale duwan.
Goobta dilku ka dhacay ayaa waxaa soo gaaray markii danbe ciidamo ka tirsan Booliska Gobolka Bari waxaan ay sameeyeen baaritaano weli aan wax natiijo ah aan lahayn sidda caadiga u ah ee dhici jirtayba.
Dilalka ka dhaca magaalada Boosaaso ayaa waxaa ay leeyihiin u jeedooyin kale duwan waxaase inta badan dilal ka dhaca Boosaaso lagu eedeeyaan ururka Al-shabaab oo dagaalo kale duwan ay ku dhex mareen Buuraha Golis ee Gobolka Bari ciidamda difaac Puntland.
Ilaa hadda ma jirto wax masuuliyiin ah oo ka tirsan Gobolka Bari oo ka hadlay dilka maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari.